Keluhan dan trauma penduduk Kg Tg Labian, Lahad Datu
Indians have been suffering under MIC, with UMNO acting as Mandore overseeing them
ပရိဒေ၀ မီးလျှံများကြားမှ ကယ်ကူရာမဲ့ ဘ၀များ
969 or Chapter9verse 69 from Quran in Burmese, Arabic and English
Sincere advice and request to the Myanmar Government, Rakhines and all the Buddhists
Christians In 24-Hour Prayer From Now Until General Elections
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရောက် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုး မွတ်စလင်မ် မိသားစုမှ ကယ်တင်ထားသော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ဦး
Posted: 06 Apr 2013 10:40 AM PDT
If things go as planned, every minute of the day from dissolution day on April3until polling day, at least one Christian will be praying for "truth, justice and righteousness" to prevail in the 13th general election.
"We may even extend it to until after polling day, to pray for peace after the results have been announced," Prayer United secretariat member Chrisanne Chin told Malaysiakini.
"The response has been very good so far. We even have people praying in the wee hours, but we do have trouble getting sign ups for the afternoons."
She said the idea for the prayer network, which consists of nine Christian fellowships, was first mooted two months ago as Malaysia has been undergoinga"critical period in history".
"It is also the 50th year – the jubilee anniversary – of the formation of Malaysia, and to us, this hasavery important and spiritual meaning," she said, although noting that the prayer drive had not been conducted in the previous polls general.
The National Envangelical Christian Fellowship (NECF) – which is alsoapart of the prayer network – for example, has producedabooklet (cover picture as in picture above) to guide its followers in their vote. (Those who would like to have the booklet, please contact me).
Among others, the NECF advises Christians to vote to stop the intimidation and discrimination of religious minorties, the spreading of hate against other cultures "like through Biro Tatanegara" and the undue influence of religious authorities in the adminstration of the state.
It also urged its followers to vote foragovernment which will "discipline overzealous 'Little Napoleons' … who thwart cabinet policies aimed at protecting and enhancing inter-racial harmony and religious freedom".
On another note, the Council of Churches of Malaysia (CCM) – in collaboration with the Catholic Research Centre – has producedavideo, which Chin said has gone "viral" on Youtube and Facebook to help Christians in deciding who to vote for. (see video below)
"Christians care, therefore we vote. It is our moral duty," the video states.
In 2008, AFP reported that Malaysia's churches cautiously waded into politics by handing out brochures urging congregations to weigh the political parties on their track record of "freedom of religion, conscience and speech" before casting their ballots in the 12th general election.
The community, which makes up about 10 percent of the population, had been under the spotlight in the past few years over the ban on the use of the word 'Allah' by non-Muslims, including in Malay-language Bibles and Christian publications.
AtaChristian Federation of Malaysia (CFM) high-tea last Christmas, Prime Minister Najib Abdul Razak offered his "friendship" to Christians and assured them that the government has not "forgotten" them.
Posted: 06 Apr 2013 10:25 AM PDT
This is what we callareal manifesto, not something cannot be delivered and dodging the rakyat.
BN manifesto, launched by the coalition government Datuk Seri Najib Tun Razak is all about reaching out to the people via simple promises and pledges not impossible to implement, as compared to Pakatan Rakyat's extreme approach.
* Building integrated bus, rail and taxi terminals in all towns and cities - Re-routing bus routes to ensure more efficient and accessible services for the rakyat
* Implementing the national high speed rail network and expanding the double tracking railway system.
* Providing more free WIFI hotspots, with particular emphasis on rural and
* Providing financial assistance and educational opportunities for lower income earners irrespective of rare
* Improving the civil service scheme to include more opportunities for promotion and development of talent and ensuring the quality of their general well-being* Extending Urban Transformation Centres to all major cities and towns
Posted: 06 Apr 2013 10:01 AM PDT
Tindakan mereka melaporkan kehadiran 'orang asing' itu kepada ketua kampung Mahmud Mallang, 72, pada Feb 27, bagaimanapun ditempelak sesetengah penduduk yang kononnya tidak mahu berprasangka buruk. "Lihat apa yang telah terjadi sekarang.
Ternyata apa yang saya dan rakan-rakan risaukan sebelum ini ada asasnya. Keamanan kami dirampas malah ada rakan memberitahu rumah mereka dibakar pengganas militan. "Kalau dahulu kita semua bersatu hati melaporkan kepada pihak berkuasa, sudah tentu keadaan tidak akan jadi seperti ini," kata Idris Abdul Kahal, 49, dalam nada kesal. Mengimbau kembali kejadian serangan militan pada Mac 1, lepas, Idris yang melarikan diri dalam keadaan sehelai sepinggang, berkata mereka dipaksa pengganas supaya segera meninggalkan kampung itu.
"Mereka bercakap dalam bahasa Suluk meminta semua orang kampung lari dengan segera jika tidak mahu diapa-apakan. Saya hanya sempat mengambil dokumen peribadi dan melarikan diri bersama penduduk kampung lain ke dalam ladang kelapa sawit. "Suara pengganas sangat parau menyebabkan kami takut mendengarnya. Waktu melarikan diri, kami juga tidak tahu ke mana kami hendak lari dan hanya berserah kepada Tuhan dan lepas empat jam berjalan, kami tiba di Lok Buani," katanya.
Idris yang kini ditempatkan di Dewan Fajar Harapan, sebuah pusat penempatan sementara, berkata ekoran serangan pengganas militan itu, anak keduanya berumur lapan tahun, sering meracau dalam tidur berkemungkinan gangguan emosi. Katanya keadaan anaknya kini semakin pulih setelah melalui proses pemulihan yang dianjur Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Jabatan Pertahanan Awam (JPAM) dan dua anaknya yang berada di tingkatan dua dan lima masih enggan ke sekolah kerana takut.
"Perkara ini sangat menyusahkan dan saya rasa seperti tidak mahu balik lagi ke Tanjung Labian kerana saya takut jika pengganas akan kembali semula," katanya yang menganggarkan mengalami kerugian hasil tanaman sawit, ternakan dan buahbuahan kira-kira RM10,000.
Penduduk Tanjung Labian keseluruhannya 3,500 orang merupakan antara penduduk yang dipindahkan selepas kampung itu diklasifikasi sebagai zon merah dalam Operasi Daulat susulan pencerobohan militan dari selatan Filipina di Kampung Tanduo, sejak Feb 12, lepas. Halimah Naukan, 48, pula berkata beliau dimaklumkan rakan bahawa rumahnya yang berdekatan Tanjung Batu dibakar pengganas militan itu.
"Saya amat marah dan kecewa. Mereka (pengganas) ini semua bersifat binatang, langsung tidak memikirkan bagaimana kami mahu hidup semula selepas ini, tiada apa lagi yang tinggal untuk kami. Mohd Asri, 33 pula amat geram dan marah dengan tindakan pengganas dari selatan Filipina itu, berkata beliau kerugian hasil sawit kira-kira RM2,400 bagi empat kali mengait buah sawit dalam sebulan dan mungkin kehilangan ternakannya iaitu empat ekor lembu dan enam kambing.
"Saya dengar ada orang cakap beberapa buah rumah dibakar di kawasan rumah kami dan ternakan kami diambil oleh pengganas. Kalau benar ia berlaku maka banyak saya rugi kerana lembu RM3,00 seekor, kambing RM600 seekor, tidak termasuk rumah terbakar," katanya. — Sumber Sabahkini
Posted: 06 Apr 2013 08:30 AM PDT
Christians decide carefully who you want to vote for. Watch this video, which gives you ideas on what issues are important to you. You decide.
The general election will take place very soon. It is the right and duty of every eligible Catholic to vote. Our vote is not only to choose the right government but to express our expectations in the right election candidate. This letter gives my personal opinion on right Christian voting.
Much is being said and written on fair elections, makingachange, party politics, revealing alleged atrocities etc. in the Internet and printed media. We haveahigher responsibility than just expressing our feelings over which party should be ruling us. As Catholics we havearesponsibility to reveal and reflect the Truth. Our vote should be the 'voice of Christ' in the current day political setting which seems to be filled with self-centred agendas which are not for the good of all men and women regardless of race, creed or culture.
In my opinion we need to do the following before we vote:
2. Take responsibility to listen, read and learn about all the parties' manifestos and be aware of what kind of government they propose. Will it be for the good and growth of all men? Will it be promoting Justice?
3. Vote for the candidate who asaperson preaches and to the best of our knowledge practises Justice, Truthfulness and Ethical political behaviour rather than voting for any candidate just because he belongs to the party our heart and emotions prefer. The right candidate in any party will do the right thing. The wrong candidate in any party will do the wrong thing.
As Catholics we must make it very clear that while we love all men, we support only right values in politics. Being suchavoter one may not be popular or thought to be correct by all. However, can we afford not to take the opportunity to make Christ known in politics? It is an opportune time that this election will take place in the Year of Faith.
So let us pray, reflect, discern and then vote. Let us look beyond ourselves. Let us look beyond5years. Let us look beyond 10 years. Let us consider the laws that will govern politicians in God's Kingdom here on earth. Let us consider promotingapolitics which prefers Justice, Truth and Ethics. Herald Malaysia
Posted: 06 Apr 2013 07:16 AM PDT
Unofficially Muslims in Myanmar may be between 15-20% of the population.
Almost every year, especially Saudi Embassy authorities are puzzled with the large number of Haj visa applicant passports of Myanmar Buddhists were applying the Haj visas. Islamic Religious Officers have to explain that most of them were Muslims but registered as Buddhists to be able to get the documents easily.
No wonder Myanmar Military Dictators are scared of Muslim citizens and trying to discriminate and persecute them in all possible ways.
၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်က ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ကောက်ယူခဲ့တဲ့ စာရင်းအင်းတွေအရ ရန်ကုန်တိုင်း အတွင်းမှာ နေထိုင်သူ လူဦးရေ (၅၄၂၉၀၁၃) ဦးရှိပြီး လူမျိုးအရ ပြန်လည်ခွဲခြားရရင်တော့
ကယား (၆၅၀၁) ဦး (၀.၁၂%)၊
ကချင် (၁၀၉၂၁) ဦး (၀.၂%)၊
မွန် (၃၀၄၂၉) ဦး (၀.၅၆%)၊
ချင်း (၃၂၄၃၃) ဦး (၀.၆%)၊
ရှမ်း (၃၄၂၄၈) ဦး (၀.၆၃%)၊
ရခိုင် (၆၇၂၃၀) ဦး (၁.၂၄%)၊
အခြား (၉၈၀၆၄) ဦး (၁.၈၁%) တို့ဖြစ်ပါတယ်။
ကရင် (၂၁၆၇၃၇) ဦး (၃.၉၉%)၊
အခြားဘာသာဝင် (၁၅၈၇၆) ဦး (၀.၂၉%) တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဟိန္ဒူဘာသာဝင် (၁၅၃၃၆၉) ဦး (၂.၈၂%)၊
ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင် (၁၈၃၉၀၂) ဦး (၃.၃၉%)၊
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် (၂၄၆၉၀၇) ဦး (၄.၅၅%)၊
Population statics taken from FB Mr. Mohammed Naeem
Note::I have purposely omitted Bama and Buddhist population which is obviously highest.
Posted: 06 Apr 2013 07:02 AM PDT
Watch the lowlife and scumbag cum frog Zulkifli Noordin insulting the Chinese and Indians and another dick, called Johari Abdul Ghani says he does not need the Indian or Chinese votes. He happens to beaGroup Managing Director, conveniently forgetting that he needs the Non-Malays to buy his products. So let us oblige both of them, let us not send them anywhere but into oblivion during this 13 General Elections.
Out of the many there are honorable men like for instance Datuk Haji ThasleemMohamad Ibrahim. If your are expecting Hindraf, forget that bunch of opportunistic and hypocritical losers All Indians should watch this, then decide. Do not screw up your future, vote for the correct people. It is now or never!! Hat tip: Zorro Unmasked.
Posted: 06 Apr 2013 05:39 AM PDT
Posted: 06 Apr 2013 04:39 AM PDT
ဧပြီလ ၄ ရက်၊၂၀၁၃ M-Media သန့်စင်အေး
Genocide တဲ့။ Ethnic Cleansing တဲ့။ အခုတလော မီဒီယာ စာမျက်နှာတွေမှာ မြန်မာပြည်က မွတ်စလင်မ်တွေ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ အကြောင်းရေးရင်ပါနေကြ စကားလုံး။ ခဏခဏ မြင်တွေ့နေရ ပြန်တော့လည်း အလွတ်တောင်ရနေပြီ။ ဟုတ်ပါတယ်။ အခုတလော စာရေးသူတို့မြန်မာပြည်မှာ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တွေ ရက်ရက်စက်စက် အသတ်ခံရ၊ အစ္စလာမ်သာသနိက အဆောက်အအုံတွေ ဖျက်ဆီးခံရ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဆုံးရှုံးခဲ့ရတာတွေ မကြာခဏဆိုသလို မီဒီယာတွေမှာ မြင်တွေ့ကြားသိနေပါတယ်။ သေဆုံးသွား သူတွေရှိသလို၊ ဒုက္ခသည် စခန်းမှာလည်း ဒုနဲ့ဒေးပါ။ မသေသေးဘဲ ကျန်နေတဲ့သူတွေ၊ဒုက္ခသည် စခန်းမရောက်သေးဘဲ ကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်နေတဲ့ လူတွေမှာလည်း သေဆုံးသွားသူတွေ အတွက် ပူဆွေးသောက ရောက်ရတာကတစ်မျိုး၊ စီးပွားရေးတွေ ကျဆင်းလို့ စိတ်ညစ်ရတာက တစ်ဖုံ၊ ပြီးတော့ ကြိုးတိုက်ထဲက ကြိုးမိန့်ကျခံနေရတဲ့ အကျဉ်းသားတွေလို "ကိုယ့်အလှည့်ဘယ်နေ့လဲ"ဆိုပြီး တွေးပူ နေရတာတွေနဲ့ "စိတ်ထောင်းတော့ ကိုယ်ကြေ" ဆိုတာလိုမျိုးနဲ့ ကျီးလန့်စာစားဖြစ်နေရပါတယ်။ အို…အလ္လာဟ်၊ ကျွန်တော်မျိုးတို့မှာ ဒုက္ခဆင်းရဲမျိုးစုံ ခံစားနေကြရတဲ့အပြင် ကိုယ်ခံစားနေရတဲ့ ဒုက္ခတွေကိုတောင် ပွင့်ပွင့် လင်းလင်းဖွင့်ပြောခွင့် မရှိတဲ့ဘ၀၊ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မျက်လုံးတွေမှ တဆင့် ပြောနေကြတဲ့စကား၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မျက်နှာတွေက တဆင့် ဖွင့်ဟပြောဆိုနေကြတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပူဆွေးဗျာ ပါဒတွေကို အလ္လာဟ် အသိဆုံး၊ အမြင်ဆုံးပါ။ ကျွန်တော်တို့အေးချမ်းချင်လှပါပြီ။ ကျွန်တော်မျိုးတို့အား "အနိဌာရုံတွင်းနက်ကြီးထဲမှ အမြန်ဆုံးကယ်တင်ဆွဲထုတ်တော်မူပါ"။
ဟုတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တွေဟာ အခုအချိန်မှာ ဆင်ဝှေ့ရန်ရှောင် ဆိုတာလို ဖြစ်နေပါတယ်။ လွန်ကဲတဲ့အတ္တစိတ်တွေနဲ့ ဘီလူးစီးနေတဲ့ ဆင်ရိုင်းကြီးတွေက ကျွန်တော်တို့ကို အစွယ်နဲ့ထိုး၊ ခြေထောက်နဲ့နင်း၊ နှာမောင်းနဲ့ရစ်ပတ်ပြီးမြေကြီးကိုဆောင့်ချ လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ အဲဒီဆင်ရိုင်းကြီးတွေကို ပြန်လည်တွန်းလှန်ဖို့နေနေသာသာ ကိုယ့်ကိုယ် မထိအောင် မနည်းရှောင်တိမ်းနေရပါတယ်။ အဲဒီ ဆင်ရိုင်းကြီးတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုဒဏ်ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချို့သော မိသားစုဝင်များကတော့ အေးငြိမ်းသော "အမတသုခဘုံ"မှာ ခိုလှုံသွားခဲ့ကြပြီ၊ အချို့က ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာ၊ အချို့က ဆေးရုံမှာ၊ အချို့ကတော့ ဘယ်ဆီရောက်နေမှန်းမသိ၊ အကောင်းအတိုင်းကျန်ရစ်နေတဲ့သူတွေကလည်း ဒုက္ခရောက်နေသူတွေကိုမြင်ရ၊ ကြားရတော့ "ရှားမီးခဲတွင်၊ ရဲရဲငယ်ကင်၊ အကျွန်မမြင်ဝံ့ပါပြီတကား"ဆိုတဲ့ ချိုးမောင်နှံကဗျာလေးထဲကလို မိမိချစ်ခင်ရသောသူတွေ ရှားမီးခဲတွင် ကင်ခံနေရတာကို မကြည့်ဝံ့၊ မမြင်ဝံ့ ဖြစ်နေရတဲ့အပြင် "မိမိလည်းတစ်နေ့ သူတို့လိုပဲ ခံစားရမှာလား"ဆိုတဲ့ အသိနဲ့ "ဆုပ်လည်းစူး၊ စားလည်းရူး"ဖြစ်နေရပါတယ်။
စိုတဲ့လက်တွေ မခြောက်ဖို့အတွက် အဓိကရုဏ်းကို အမည်တပ်မမှားစေလို
ဒီနေရာမှာ စာရေးသူတို့အနေနဲ့က မိမိတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကို အများက ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ဝင်လာ အောင် ခံစားချက်ဓာတ်ကူးပေးဖို့လိုပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကို အဓိကပစ်မှတ်ထားပြီး ဦးတည်တိုက်ခိုက်နေတယ်ဆိုပေမယ့် ဒါဟာ ဘာသာရေးပဋိပက္ခမဟုတ်ပါဘူး။ နိုင်ငံရေးအလှည့်အပြောင်းမှာ မွတ်စလင်မ်တွေဟာ မြေဇာပင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ အများကို တင်ပြတတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်လို့ အကြံပြုလို ပါတယ်။ ဒါကို သေသေချာချာ ဂဃနဏ မသိဘဲ ခံစားချက်ကိုရှေ့တန်းတင်ရင် လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ပဋိပက္ခ တွေကို ဘာသာရေးပဋိပက္ခအသွင်ပြောင်းသွားအောင်ဖန်တီးဖို့ မသမာသူတွေကို အခွင့်အရေးပေး သလို ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါကြောင့် ဆူဆူပူပူဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ အတတ်နိုင်ဆုံး ရွှေဝါရောင်သံဃာတော်များအဖွဲ့၊ ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ ၈၈ မျိုးဆက်အဖွဲ့တွေအစရှိတဲ့ သမာသမတ်ရှိတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ အတတ်နိုင်ဆုံး ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပါ။ မီဒီယာတွေနဲ့လည်း ဆက်ဆံရေးယူထားပါ။ အမှန်တရားကို အရှိအတိုင်း လူထုကို ချပြဖို့အခွင့်အရေး မရရင်တောင် အမှန်တရားနဲ့ အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်အောင် ရေးဖို့တောင်းဆိုပေးပါ။ မိမိ နေထိုင်ရာ ဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့ ဘာသာခြားတွေနဲ့လည်း ရပ်ရွာလုံခြုံရေး လုပ်ငန်းတွေကို ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်ကြစေလိုပါတယ်။ အဲဒီလို အဆင့်ဆင့်ဆောင်ရွက်ပြီးတာတောင်မှ အခြေအနေကို မထိန်းသိမ်းနိုင် တော့ဘူးဆိုရင်လည်း "ကိုယ့်အိမ်၊ ကိုယ့်ရပ်ရွာနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို စောင့်ရှောက်ခွင့်ဆိုတာရှိပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကာကွယ်ပိုင်ခွင့်လည်းရှိပါတယ်။ တရားဥပဒေအရ ခွင့်ပြုထားတာပါ။ အဲဒီတော့ ကျွန်တော်တို့နေရာ ဒေသကိုလာဖျက်လို့၊ ကျွန်တော်တို့ အိမ်ကိုလာဖျက်လို့၊ ကျွန်တော်တို့ကို အန္တရာယ်လာပြုလို့ ခုခံကာကွယ်တာမျိုးပဲဖြစ်ရပါမယ်။ ဘာသာရေးအသွင်ဆောင်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုမျိုးတွေလုပ်ရင် စောစောကတင်ပြထားတဲ့အတိုင်း မသမာသူတွေကိုအခွင့်အရေးပေးသလို ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာကို သတိရပါ။ အခုလိုမျိုး အကြံပြုနေရတာကတော့ "တရားလိုကနေ တရားခံဖြစ် မသွားစေချင်လို့"ပါ။ ပြီးတော့ ဘာသာမတူသူ အများစုကလည်း အခုလို မွတ်စလင်မ်တွေအပေါ် ကိုယ်ချင်းစာ စိတ်ဖြစ်ပေါ်နေတုန်းမှာ ကိုယ့်ဖက်ကစပြီး "စိုတဲ့လက် တွေကို ခြောက်သွားအောင်"မလုပ်မိဖို့လိုပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီနေရာမှာအဆိုးထဲကအကောင်းဆိုသလိုပေါ့လေ။ ကျွန်တော်တို့ကို ကိုယ်ချင်းစာနား လည်ပေးနိုင်မယ့်သူတွေ၊ ကျွန်တော်တို့ဘက်က ရပ်တည်ပေးတဲ့သူတွေ၊ ကျွန်တော်တို့ကိုကာကွယ်ပေးတဲ့ သူတွေလည်း ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဆရာတော်အရှင် ၀ိသုဒ္ဒ (မိတ္ထီလာမြို့၊ ရတနာကျောင်းတိုက်) ကတော့ ဆရာတော်ရဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းထဲ ၀င်ပြေးသွားတဲ့ မွတ်စလင်မ်ဒုက္ခသည်တွေကိုထုတ်ပေးဖို့ အကြမ်းဖက် သမားတွေက တောင်းဆိုရာမှာ ထိုဘုန်းတော်ကြီးက ထုတ်မပေးဘဲ ကာကွယ်ပေးခဲ့တာတွေ၊ အလားတူပဲ ရွှေဝါရောင် သံဃာတော်များ အဖွဲ့ကလည်း ဒုက္ခရောက်နေတဲ့မွတ်စလင်မ်တွေကို လိုက်ပြီး ကူညီပေးခဲ့တာ၊ လိုက်ပြီး စောင့်ရှောက်ပေးခဲ့တာတွေ၊ ၎င်းပြင် ကိုမင်းကိုနိုင်တို့လို ၊ ဆရာမ သန်းမြင့်အောင်တို့လို အမှန်တရားဘက်က မားမားရပ်တည်ပေးတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလည်း ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ အလားတူပဲ နောက်ထပ်လည်း လူအများစုကြီးထဲမှ အချို့သူများက ဒီကိစ္စမှာ မွတ်စလင်မ်တွေအပေါ် စာနာမှုတွေပြခဲ့ကြပါတယ်။ အကူအညီတွေလည်းပေးခဲ့ကြပါတယ်။ ထိုသူများကိုတော့ စာရေးသူတို့ နှလုံးသားထဲမှာ ကျေးဇူး တင်လျက်ရှိပြီး ၎င်းတို့အပေါ်သို့လည်း မေတ္တာများပို့သပေးလျက်ရှိပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ မေတ္တာကမ်းပိန်းမှ ဆရာတော်များလို မြန်မာနိုင်ငံမှာ "ဘာသာပေါင်းစုံချစ်ကြည်ရေး" ကိုဦးဆောင်ပြီးလုပ်နေကြတဲ့ ဘာသာပေါင်းစုံ မှ သံဃာတော်၊ ဆရာတော်များကိုလည်း အထူးကျေးဇူး တင်လျက်ရှိနေကြပါတယ်။ မေတ္တာကမ်းပိန်းအပြင် နောက်ထပ်လည်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘာသာပေါင်းစုံချစ်ကြည်ရေးကို ဖော်ဆောင်နေတဲ့ သံဃာတော်များနဲ့ သက်ဆိုင်ရာဘာသာရေး အကြီးအကဲများ၊ သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အကြမ်းဖက်မှုပေါ် ပေါက်လာတိုင်းမှာ လူထုကို ငြိမ်းချမ်းရေးတရားတွေဟောပြီး ငြိမ်းချမ်းစေဖို့ သံဃာတော်များ၊ ကြေငြာစာတွေ ထုတ်ပြန်ပြီး လူထုကို ငြိမ်းချမ်းဖို့အသိတွေပေးတဲ့ အဖွဲ့အစည်းအားလုံးကိုလည်း ကျေးဇူး အထူးတင်လျက်ပါ။ နောက်ထပ်သတိထားမိတာကတော့ တစ်သက်လုံးက မွတ်စလင်မ်ကိုဆိုရင် "မင်းတို့ ကုလားတွေပါ"ဆိုပြီး ဝေဖန်ခဲ့သူ အချို့ကတောင် မွတ်စလင်မ်ကလေးတွေ အသတ်ခံရတာကိုကြားရတော့ "ဒီကောင်တွေလုပ်တာ သိပ်လွန်သွားပြီ"လို့ ပြောတာ ကြားခဲ့ရပါတယ်။ အဆိုးထဲက အကောင်းကို ဆွဲထုတ်ယူပြီး အမှန်တကယ်ကျေးဇူးတင် ထိုက်သူတွေကို ကျေးဇူးတင်ခြင်းပါ။
မွတ်စလင်မ်ကို အနုနည်းနဲ့ ဆန့်ကျင်ကြရာဝယ်…
မြန်မာပြည်တွင်းမှာ အချို့သောသူများက မွတ်စလင်မ်ကို အကြမ်းနည်းနဲ့ နှိပ်ကွပ်နေသလို အနုနည်းနဲ့ ဆန့်ကျင်လာကြတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ "မွတ်စလင်မ်ဆိုင်မှာမ၀ယ်နဲ့၊ မွတ်စလင်မ်ဆိုရင်မရောင်းနဲ့" တိုင်းပြည်ထဲမှာ မွတ်စလင်မ်အပေါ် ပိတ်ဆို့မှုတွေလုပ်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ သြော်…သမ္မတကြီးကတော့ နိုင်ငံ တကာလှည့်ပြီး နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေကို မြန်မာပြည်အပေါ်မှာ ပိတ်ဆို့ အရေးယူထားတွေကို လျှော့ချ ပေးဖို့ ၊ Sanction တွေကို ရုပ်သိမ်းပေးဖို့ တောင်းဆိုနေတဲ့အချိန်မှာ သူတို့ကတော့ ပြည်တွင်းမှာပြန်ပြီး Sanction တွေလုပ် သမ္မတမျက်နှာကိုတောင်မထောက်တော့တာလား။ ဒါမှမဟုတ်… နိုင်ငံတကာက ပိတ်ဆို့ အရေးယူမှုတွေကို ခံစားနေရတာ မြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးပါ။ ဘာသာ/လူမျိုး မရွေးပါဘူး။ အခုလို နိုင်ငံတကာက ပိတ်ဆို့ခံထားရသူ အချင်းချင်းကြားထဲမှာ ပြန်ပြီးအသေးစား Sanction တွေပြန်လုပ်တယ်ဆိုတာ ကမ္ဘာက မသိဘဲနေမလား၊ ဒီလိုသိသွားရင် မြန်မာပြန်ရဲ့အနာဂတ်က ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲ။ နိုင်ငံတကာက ပိတ်ဆို့တာတွေကို အထပ်ထပ်ခံနေရတဲ့ LDC (ဖွံဖြိုးတိုးတက်မှုနိမ့် ကျဆုံးသောတိုင်းပြည်)က ပြည်သူ/ပြည်သား အချင်းချင်း စုပေါင်းတိုင်ပင်ကြပြီး ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကို ဘယ်လို တိုးတက်အောင် လုပ်မလဲဆိုတာ ဆွေးနွေးရမယ့် အချိန်မှာ ဇာတ်တူသား စားဖို့ ကြံနေရင်တော့ ဟင်္သာတမျိုးလုံး ပျက်သလိုဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဆိုတာ စေတနာနဲ့ အကြံပြုပါရစေ။
ဒီနေရာမှာတော့ စာရေးသူက အိန္ဒိယသမ္မတဟောင်း သမ္မတကြီး အဗ္ဗဒူလ်ကလာမ် ရေးတဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်ထဲကအကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကို ပြန်သွားပြီးသတိရမိပါတယ်။ သမ္မတကြီး အဗ္ဗဒူလ်ကလာမ်က အိန္ဒိယမှာ သမ္မတတာဝန် ထမ်းဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာ သမ္မတကြီးက အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေကို သွားရောက် လှည့်လည်ပြီး ကျောင်းသားလေးတွေကို မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါတယ်။ "မင်းတို့ရန်သူက ဘယ်သူလဲ"ဆိုတဲ့မေးခွန်းပါ။ ကျောင်းအားလုံးက ကျောင်းသားလေးတွေ အားလုံးနီးပါက ပြန်ဖြေပါတယ်။ "ကျွန်တော်တို့ရန်သူက ပါကစ္စတန်"ပါတဲ့။ အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲ… အိန္ဒိယနဲ့ပါကစ္စတန်ဆိုတာ ရန်သူလိုဆက်ဆံနေကြတာ၊ နှစ်နိုင်ငံ စလုံးကလည်း သူတို့နိုင်ငံရဲ့ မျိုးဆက်သစ်လေးတွေကို အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်အမည်ခံ စိတ်သွေးကြွစိတ်ဓာတ်တွေ ရိုက်ထည့်ပေးထား ကြတာဆိုတော့ ကျောင်းသားလေးတွေက အဲဒီလိုပဲဖြေတာပေ့ါ။ ဒါပေမယ့် ကျောင်းသားလေး တစ်ယောက် ဖြေတဲ့အဖြေကတော့ ထူးခြားစွာပဲ အများနဲ့ကွဲလွဲနေပြီး အင်မတန်မှ ချီးကျူးစရာကောင်းပါတယ်။
သူဖြေလိုက်တဲ့အဖြေကတော့ "ကျွန်တော့်ရဲ့ရန်သူက ဆင်းရဲမွဲတေမှုပါ တဲ့။ ကျွန်တော်က ကျွန်တော့်မိသားစုမှာ အငယ်ဆုံးပါ။ ကျွန်တော့်မိဘတွေက ကျွန်တော့်ကိုအငယ်ဆုံးမို့လို့ ပညာတတ်ဖြစ်စေ ချင်လို့ ကျောင်းပို့ရာမှာ ပိုက်ဆံ မလုံလောက်တဲ့အတွက် ကျောင်းတက်နေတဲ့ ကျွန်တော့်အစ်ကို ၊ အစ်မတွေကို ကျောင်းထုတ်၊ အပြင်ထွက်အလုပ်လုပ်ခိုင်းပြီးမှ ကျွန်တော့်ကိုကျောင်းပို့ရတာပါတဲ့။ အဲဒါ ကျွန်တော်သိထားတဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ရန်သူပါပဲတဲ့"။ ဟုတ်ပါတယ်။ စာရေးသူတို့တိုင်းပြည်မှာလည်း စာရေးသူတို့ ပြည်သူပြည်သား အားလုံးရဲ့ ဘုံရန်သူ ဟာဘယ်သူပါလဲ၊ စာရေးသူတို့ ရှာကြသင့်ပါပြီ။ စာရေးသူလည်း ဒီအဖြေပဲထပ်ဖြေပါ့မယ်။ "ဆင်းရဲမွဲတေမှု"ပါ။ စာရေးသူတို့တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ ပြည်သူ/ပြည်သားတွေ၊ လူမျိုး/ဘာသာမခွဲပါဘူး။ အဲဒီ ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ တစ်လပျမ်းမျှဝင်ငွေဘယ်လောက်ရှိပါသလဲ၊ ပြီးတော့ Human Development Index "လူစွမ်းအား အရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးမှု ညွှန်းကိန်း"ရဲ့ စံချိန်စံနှုန်းတွေနဲ့ ပြန်တိုင်းကြည့်ပါ။ စာရေးသူတို့ ပြည်သူပြည် သားတွေဘယ်လောက်နည်းပညာတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီလဲ၊ နိုင်ငံတကာနဲ့ရင်ပေါင်တန်းနိုင်ပြီလား စသည်ဖြင့် မေးခွန်းတွေ အများကြီးပါ။ မြန်မာပြည်မှာလူတိုင်း ဖုန်းကိုင်နိုင်ပြီလား၊ လူတိုင်းအင်တာနက်သုံးနိုင်ပြီလား၊ နိုင်ငံ တကာသုံးဘာသာစကား အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားကို လူတိုင်းနီးပါးရေးတတ်/ပြောတတ်ပြီလား။ မြန်မာပြည်ကလူတိုင်းလိုလို အင်္ဂလိပ်စာညံ့တယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံခြားမှာ အင်္ဂလိပ်စကား မတတ်လို့ အထင်သေးတဲ့အကြည့်နဲ့အကြည့်ခဲ့ရတဲ့သူတွေထဲမှာ အများဆုံးက ဘယ်နိုင်ငံသားတွေပါလဲ။ ဒါကအပိုင်းတစ်ပိုင်းပေါ့လေ။
စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ ပြန်ပြောရရင်တော့ အနီးစပ်ဆုံး သာဓကတစ်ခုပြပါ့မယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပတ်ကျော်လောက်က Weekly Eleven ဂျာနယ်မှာဖတ်လိုက်ရပါတယ်။ "ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော အဓိကရုဏ်းများကြောင့် ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ စီပွားရေးအခွင့်အလမ်း တွေ ရှားပါးပြီးတော့ ရခိုင်ပြည်နယ် ဒေသခံ (၃) ပုံ (၁) ပုံခန့်သည် ၎င်းတို့ရဲ့မွေးရပ်မြေကို စွန့်ခွာပြီး အခြားတိုင်းဒေကြီးများမှာ သွားရောက်အလုပ် လုပ်ကိုင်နေကြရသည်"တဲ့။ အဲဒါ အဖြေပါပဲ။ စာရေးသူတို့ ရန်ကုန်မှာရော ရုတ်ရုတ်သဲသဲဖြစ်လို့ ဆိုင်တွေပိတ်ရင် နစ်နာတာ မွတ်စလင်မ်တွေပဲလား၊ မွတ်စလင်မ်တွေ နဲ့အရောင်းအ၀ယ်မလုပ်ရင် နစ်နာမှာ မွတ်စလင်မ်တွေပဲလား။ နှစ်ဖက်စလုံးနစ်နာပါတယ်။ နည်းနည်း နစ်နာတာနဲ့ များများနစ်နာတာပဲကွာချင်ကွာမယ်။ အဓိကပြောချင်တာကတော့ မွတ်စလင်မ်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်ဘာသာဝင်မဆို အကုန်လုံးက အေးအေးချမ်းချမ်း၊ အဆင့်အတန်းမြင့်မြင့်နဲ့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေချင်ကြတယ် ဆိုတဲ့အချက်တစ်ခုကတော့ တူညီနေတာ အသေအချာပါပဲ။
"ဆင်းရဲမွဲတွေမှုကို ပြတိုက်ထဲပို့ချင်လား"၊ ရတယ်။ ဒါမှမဟုတ် အခုလိုပဲ ပြဿနာပေါင်းသောင်းခြောက်ထောင်နဲ့ ဆင်းရဲသံသရာ လည်ချင်လား၊ ရတယ်။ အခြေအနေအရပ်ရပ်ကိုအစွဲကင်းကင်းနဲ့ ဓမ္မဓိဌာန်ကျကျ သုံးသပ်ကြည့်ရင် မြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးရဲ့ ဘုံရန်သူက ဘာလဲဆိုတာ ပေါ်လာပါလိမ့်မ်။ အဲဒါကို တိုက်ရမယ်။ အဲဒီလိုဆင်းရဲမွဲတေမှုကို သက်ဆိုးရှည်စေမယ့် လုပ်ရပ်တွေကိုရှောင်ရမယ်။ အဲဒီလုပ်ရပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေ ကိုလည်း သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များက တားဆီးရမယ်။ အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်အရောင်ပြပြီး မွတ်စလင်မ် မုန်းတီးရေးတွေဖန်တီး၊ Face book တွေကနေ၊ အင်တာနက် စာမျက်နှာတွေကနေ ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်းဖြစ်အောင် ၀ါဒတွေဖြန့်၊ ပြဿနာဖြစ်တော့ မဲပြာပုဆိုးဇာတ်လမ်းတွေနဲ့ ဓာတ်ပြားဟောင်းကြီး ပြန်ဖွင့် ဒီလိုမျိုးပြဇာတ်တွေ လိုက်ကာချပြီး တစ်ခန်းရပ်သင့်ပြီ။ Weekly Eleven ဂျာနယ်ရဲ့ CEO ကလည်း ၎င်းရဲ့မီဒီယာမှာ ဒီအတိုင်းပဲသုံးသပ် ထားတာကိုတွေ့ရမှာပါ။
ရှေးခေတ်အခါတုံးက ပညာရှင်ကြီးတစ်ပါးက ရှင်ဘုရင်ကို ဆုံးမခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးလိုပါပဲ။ သူတော်စင်ကြီးက ဘုရင်ကြီးရဲ့ နန်းတော်ထဲကို မောကြီးပန်းကြီးနဲ့ ၀င်ရောက်သွားတော့ ဘုရင်ကြီးက မေးပါတယ်။ ဘယ်ခရီးက ပြန်လာတာလဲ၊ ပညာရှိကြီးက ဖြေပါတယ်။ "ငရဲပြည်ခဏသွားတာ။ ဘာသွားလုပ် တာလဲဆိုတော့ ငရဲပြည်က ငရဲမီးနည်းနည်း သွားယူတာ။ ရခဲ့လားဆိုတော့ မရခဲ့ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ငရဲပြည်မှာ ငရဲမီးမရှိလို့။ ဟာ…အဲဒါဆိုရင် ငရဲပြည်မှာ ငရဲခံရမယ့် ငရဲသားတွေကို ဘာမီးနဲ့ရှို့မှာလဲလို့မေးတော့ ငရဲပြည်စောင့်နတ်မင်းကြီးက ပြန်ဖြေတယ်။ ငရဲသားတွေကို ရှို့မယ့်မီးက ငရဲပြည်မှာမရှိဘူး။ အဲဒီ ငရဲခံမယ့် ငရဲ သားတွေကို သူတို့ကို ရှို့မယ့်မီးကို သူတို့ဘာသာ ယူလာကြတာ"တဲ့။ မြန်မာစကားလည်း ရှိပါတယ်။ "ကိုယ့် ဆင်းရဲတွင်း ကိုယ့်ဖာသာတူးတာ"တဲ့။ အဲဒီလိုမျိုးမဖြစ်ဖို့တော့ အရေးကြီးပါတယ်။
အမျိုး၊ ဘာသာ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည်ဆိုရာဝယ်…
၀ံသာနုစိတ်ဓာတ်ရှိတယ်ဆိုတာ ကောင်းပါတယ်။ အမျိုးကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်တယ်ဆိုရာမှာ လည်း မိမိဘာသာ၊ မိမိလူမျိုးရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရတာ အမျိုး/ဘာသာကိုချစ်သော သာသနာဝင် ကောင်းများရဲ့တာဝန်ပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီနေရာမှာ သူ့ဘက် ကိုယ့်ဘက် မျှမျှတတရှိဖို့တော့လိုပါတယ်။ ဘယ်ဘာသာမဆို ဘာသာဝင်တိုင်းဟာ မိမိကိုးကွယ်ရာဘာသာကိုတော့ အမြတ်တနိုးနဲ့ ချစ်ခင်တွယ်တာ တတ်ကြတာချည်းပါပဲ။ ဒီနေရာမှာ အလျဉ်းသင့်လို့ မျှဝေချင်တာကတော့ မှော်ဘီ ဓမ္မဒူတကျောင်းက ဆရာတော် ရှင်ဆေကိန္ဒ အကြောင်းပါပဲ။ ယဉ်ကျေးလိမ္မာတရားစခန်းတွေဖွင့်တယ်။ ဘာသာတရားနဲ့ ယဉ်ကျေး မှုအကြောင်းတွေသင်တယ်။ သူများကိုစော်ကားတာမပါဘူး။ ကိုယ့်ဘာသာတရားအကြောင်းကို ကလေး၊ လူငယ်၊ လူကြီး သူ့အသက်အရွယ်နဲ့သူ သင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာ သင်ပြပေးသွားတယ်။ အဲဒီ ရှင်ဆေကိန္ဒရဲ့ ယဉ်ကျေးလိမ္မာသင်တန်းတက်ပြီးပြန်လာတဲ့ စာရေးသူရဲ့အသိတစ်ယောက်က သူသင်ကြားခဲ့ရတာကို စာရေးသူတို့ကို ပြန်လည် မျှဝေပေးပါတယ်။ အဲဒီအထဲမှာ သူပြန်လည်မျှဝေသွားတဲ့အချက်တစ်ခု "မကောင်းမှု ရှောင်၊ ကောင်းမှုဆောင်၊ ဖြူအောင်စိတ်ကိုထား"တဲ့…။ မှော်ဘီ ဓမ္မဒူတကျောင်းက ရှင်ကိန္ဒကို မြန်မာပြည်က လူတွေ လူမျိုး/ဘာသာမရွေး တော်တော်များများက လေးစားကြပါတယ်။ ဆရာတော်ဖြန့်ဝေပေးနေတဲ့တရား တော်တွေ၊ ဆရာတော်ရဲ့ကြည်ညိုလေးစားစရာကောင်းတဲ့ လုပ်ရပ်တွေကြောင့်ပေါ့။ အလားတူပဲ ဆရာတော် ရှင်ဆေကိန္ဒကဲ့သို့ ကြည်ညိုလေးစားဖွယ်ရာကောင်းတဲ့ အခြားသော သံဃာတော်၊ ဆရာတော်များလည်း များ စွာ ရှိပါသေးတယ်။
ဒီနေရာမှာ စာရေးသူအဓိကမျှဝေချင်တာကတော့ စနစ်တကျ ကြိုတင်အကွက်ချစီမံပြီး လုပ်ကြံဖန်တီး ထားတဲ့ ထောင်ချောက်ထဲကို မ၀င်မိဖို့ပါပဲ။ အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကို အခြေခံပြီး ဖန်တီးထားတဲ့ပုံပြင်လေးတစ်ပုဒ် မျှဝေပါရစေ။ မာရ်နတ်က နံရံပေါ်မှာ ပျားရည်လေးတစ်စက်သုတ်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီပျားရည်ကို ပုရွက်ဆိတ် လေးတွေက လာစုပ်ယူတယ်။ အဲဒီပုရွက်ဆိတ်ကို နှံကောင်လိုသတ္တ၀ါတွေကလာစားတယ်။ အဲဒီနှံကောင်လိုမျိုး သတ္တ၀ါငယ်လေးတွေကို ကြောက်က ခုတ်တယ်။ ကြောင်ကို ခွေးက ကိုက်တယ်။ အဲဒီတော့ ကြောင်ပိုင်ရှင်က ခွေးကိုရိုက်တယ်။ အဲဒီတော့ခွေးပိုင်ရှင်က ကြောင်ပိုင်ရှင်ကိုပြန်ရိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ခွေးပိုင်ရှင်၊ ကြောင်ပိုင်ရှင် နှစ်ဖက်စလုံးက ဆွေမျိုးသားချင်း၊ ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေပါ ထသတ်ကုန်ကြတယ်။ အားလုံးပျက်စီးကုန်ကြ တယ်။
အခုလိုမျိုး လေးစားဖွယ်ကောင်းတဲ့ ရဟန်းသံဃာတော်တွေ၊ နိုင်ငံရေးပါတီအချို့နဲ့ လူမှုရေးအဖွဲ့ အစည်းတွေကပါ ပြဿနာတွေမဖြစ်ပေါ်အောင် လိုက်လံတားဆီးနေပြီး ပြည်သူအများစုကလည်း အေးချမ်းစွာနေထိုင်နေကြတဲ့အခါကျတော့ အကြမ်းဖက်သမားတွေက လူအုပ်စုနဲ့ဝင်လာပြီး ဖျက်ဆီးလို့ လည်းမရ၊ တစ်ဘာသာနဲ့ တစ်ဘာသာကြား ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားအောင် သွေးထိုး လှုံ့ဆော်လို့လည်းမရတော့ရင် နောက်ထပ်ဗျူဟာတစ်ခုပြောင်းပြီး မထင်မှတ်တဲ့အချိန်မှာ အလစ်အငိုက်ဖမ်းပြီး တိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေ လုပ်လာတတ်ပါတယ်။ ဒါကိုလည်း လက်ရှိ ကမ္ဘာမှာဖြစ်ပျက်နေတာတွေရော၊ စာရေးသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံ အရရော ချိန်ဆကြည့်ပြီး သိနိုင်ပါတယ်။
I.Q နဲ့ E.Q
စင်္ကာပူနိုင်ငံကို ပြန်လည်ထူထောင်နေတဲ့အချိန်မှာ စင်္ကာပူဝန်ကြီးချုပ် လီကွမ်ယု ပြောခဲ့ဖူးတဲ့ စကားလေးတစ်ခွန်းရှိပါတယ်။ "သူ I.Q သမားတွေပဲ လိုချင်တယ်၊ E.Q သမားတွေမလိုချင်ဘူး"တဲ့။ "ဦးနှောက်နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ ပညာရည်ပြည့်ဝသူတွေပဲလိုချင်တဲ့၊ စိတ်ခံစားမှုရေးရာတွေကို ဇာချဲ့တာမျိုး မလိုချင်ဘူး"ပေါ့။ စာရေးသူလည်း ဒီစကားကို ကြား ကြားချင်းတော့ စိတ်ထဲတစ်မျိုးဖြစ်သွားပါတယ်။ ဒီလူကြီးမင်းက လူတွေရဲ့ ခံစားချက်ကို ဂရုမစိုက်ဘူးလို့ ပြောချင်တာလားပေါ့။ လူတစ်ဦးတစ်ယောက် ချင်းစီမှာရှိကြတဲ့ ကွဲပြားခြားနားတဲ့အရည်အချင်းတွေကို အသိအမှတ်မပြုတာလားပေါ့။ ဒါပေမယ့် လက်ရှိ စာရေးသူတို့တိုင်းပြည်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အခြေအနေတွေနဲ့ချိန်ဆပြီး သူပြောတာကို အပြည့်အ၀ လက်ခံတာ မဟုတ်သည့်တိုင်အောင် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ခံစားလို့ရသွားပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ တိုင်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်နေတဲ့အချိန်၊ တိုင်းပြည်ကို တိုးတက်အောင် လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ စိတ်ခံစားချက်ကို ဦးစားပေးလိုက်ရင် ဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးနဲ့ "အမှိုက်ကစ ပြသာဒ်မီးလောင်"သလိုဖြစ်မှာစိုးလို့ ပြောခဲ့ဟန် တူပါတယ်လို့ နားလည်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ အခုစာရေးသူတို့တိုင်းပြည်မှာပဲကြည့်လေ။ လူဆိုတာ ကိုယ့်ကို လူတစ်ယောက်က ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ဝေဖန်တာမျိုးကို သည်းခံချင်သည်းခံမယ်၊ ကိုယ့်ယုံကြည်ချက် ဘာသာတရားကို ထိလာရင်တော့ သည်းခံဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဘယ်ဘာသာမဆို အားလုံးအတူတူပါပဲ။ အဲဒါ ကြောင့်မို့လို့လည်း ဒီဘာသာရေးဟာ တစ်သက်လုံးက ပါးနပ်ပြီး ကောက်ကျစ်သူတွေရဲ့ အရောင်ဆိုးခြင်းကို ခံနေရတာပါ။
စာရေးသူတို့လည်း စာရေးသူတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ပြောနေ၊ ဟောနေ၊ ရေးနေကြတဲ့ အစ္စလာမ်အပေါ် အပြုသဘောမဆောင်တဲ့ အရာတွေကို နေ့စဉ်နှင့် အမျှ တွေ့မြင်ကြား သိနေရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စောစောက တင်ပြခဲ့သလို ပေါ့လေ။ ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေကို ရှင်းလင်းတဲ့နေရာမှာ အခြေအနေပေးရင် "မီဒီယာရှင်းလင်းပွဲ"လိုမျိုး ပွဲတစ်ခုစီစဉ်ပြီး ဒါတွေကို အေးချမ်းစွာနဲ့ပြန်လည်ရှင်းလင်းတင်ပြဖို့ရှိပါတယ်။ အင်ရှာအလ္လာဟ်… ဒါပေမယ့် အဲဒီလိုပွဲလုပ်ဖို့ အခြေအနေနဲ့အချိန်အခါတစ်ခုကို အရင်ဖန်တီးကြရမှာပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ လတုန်းက မန္တလေးမှာလုပ်တဲ့ ဘာသာပေါင်းစုံ ချစ်ကြည်ရေးပွဲမှာဟာ အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပေမယ့် အဲဒီပွဲမှာ ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေကြုံခဲ့ရသလဲ၊ ဘယ်လိုစိတ် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စရာ တွေကြုံခဲ့ရသလဲဆိုတာ ပွဲတာဝန်ရှိ သူတွေကို မေးကြည့်ကြပါ။ ဒါပေမယ့် တွေ့ကြုံလာတဲ့အခက်အခဲတွေကို ရင်ဆိုင်ရာမှာ စိတ်ကို တည်တည် ငြိမ်ငြိမ်ထားပြီး သဘောထားကြီးကြီးနဲ့ စဉ်းစားဆင်ခြင် ဥာဏ်အမြော်အမြင်ကိုသုံးပြီး ဖြေရှင်းပြသွားတဲ့ ထိုပွဲစီစဉ် သူတွေ၊ တာဝန်ရှိသူတွေကိုလည်း စာရေးသူ ဤနေရာကပဲ ချီးကျူးလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ စာရေးသူ တင်ပြ ချင်တာက E.Q ဟာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပေမယ့် နေရာတကာတော့ ရှေ့တန်းတင်လို့မရပါဘူး။ "အမှိုက်ကစ ပြသာဒ်မီးမလောင်"ဖို့ ကိုယ်က သည်းခံသင့်တာ သည်းခံရပါတယ်။ အမြဲတမ်းကြီး သည်းခံပါလို့မဆိုလိုပါဘူး။ သည်းမခံနိုင်လို့ပြန်ရှင်းမယ်ဆိုလည်း လူအများလက်ခံနိုင်အောင် ဥပဒေဘောင်အတွင်းကနေ အကျိုးသင့် အကြောင်းသင့် ရှင်းလင်းတင်ပြဖို့လိုပါတယ်။ မြန်မာပြည်သူ/ပြည်သား အများစုက အေးဆေးသိမ်မွေ့သူတွေပါ။ ဒါပေမယ့် စာရေးသူစောစောကတင်ပြခဲ့သလို သူတို့အထဲမှာလည်း "ပါးနပ်တဲ့ ပျားရည်သုတ်သူတွေ"ထောင် ထားတဲ့ထောင်ချောက် မိနေသူတွေရှိပါတယ်။ သူတို့ကို သူတို့ရဲ့ မူရင်းဖြူစင်တဲ့ စိတ်ဓာတ်ကောင်းလေးတွေ ပြန် ပေါ်လာဖို့ စာရေးသူတို့က ကိုယ်တွေရဲ့ခံစားချက်၊ နစ်နာချက်တွေကို presentation လုပ်ရာမှာ သိမ်မွေ့ငြင်သာပြီး အမြော်အမြင်ရှိဖို့လိုပါတယ်။
စာရေးသူတို့မြန်မာနိုင်ငံဟာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ ကြီးမားတဲ့နိုင်ငံရေးပြောင်းလဲမှုကြီး ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာ လူတိုင်းအသိပါ။ နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်ခေါင်းဆောင်တဲ့ အစိုးရအဖွဲ့က နိုင်ငံတော် အုပ်ချုပ်ရေး အာဏာလွှဲပြောင်းရယူခဲ့ပြီး နိုင်ငံအတွင်းမှာ ကြီးမားလှစွာသော အပြုသဘောဆောင်တဲ့ပြောင်းလဲ မှုတွေကို အစဉ်တစိုက် လုပ်ဆောင်လာခဲ့တာကြောင့်လည်း ရဟန်းရှင်လူများက သာဓုခေါ်ဆိုခဲ့ကြရပါတယ်။ "သန့်ရှင်းသောအစိုးရ၊ ကောင်းမွန်သော အုပ်ချုပ်မှု"ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်နဲ့အညီ သမ္မတကြီးဟာ ၎င်းတို့ အစိုးရအဖွဲ့ ကိုယ်တိုင်အပြင် အတိုက်အခံနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များနဲ့ပါ တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းပြီး နိုင်ငံတော်တိုးတက်ရေး၊ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက် နေ့မအား၊ ညမနား လုပ်ဆောင်နေတာတွေကို တွေ့မြင်နေရပါတယ်။ အကျဉ်း သားတွေကို အသုတ်လိုက်ခွဲပြီး လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့တုံးကဆိုရင် သက်ဆိုင်ရာ အကျဉ်းထောင်အသီးသီး ရှေ့မှာ လူထုကြီးက "သမ္မတကြီး ချမ်းသာပါစေ ၊ ကျန်းမာပါစေ"ဆိုပြီး အာခေါင်တွေကွဲမတတ် အော်ဟစ်ပြီး သမ္မတကြီးကို ကောင်းချီးပေးခဲ့ကြတာ၊ မေတ္တာပေးခဲ့ကြတာပါ။ ဒီလိုမျိုး စာရေးသူတို့နိုင်ငံမှာ နိုင်ငံတော် သမ္မတကို၊ နိုင်ငံတော်ရဲ့အကြီးအကဲကို လူအုပ်စု လိုက်ဖွဲ့ပြီး မေတ္တာပို့တဲ့ လုပ်ရပ်ကို စာရေးသူ အသက် ၃၀ ကျော် သက်တမ်းအတွင်းမှာ ပထမဆုံးအကြိမ်မြင်ဖူးတာပါ။ နောက်ပြီး မြစ်ဆုံကိစ္စမှာလည်း အများပြည်သူရဲ့ သဘောဆန္ဒအတိုင်း သက်ဆိုင်ရာ ပညာရှင်များနဲ့ ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ပြီး မြစ်ဆုံရေကာတာ စီမံကိန်းကို သမ္မကြီးရဲ့ သက်တမ်းအတွင်းမှာ ရပ်ဆိုင်းခဲ့တာတွေဟာ အင်မတန်မှကို လေးစားစရာကောင်းပါတယ်။ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး လေ့လာ အကဲဖြတ်သုံးသပ်သူတွေကလည်း သမ္မတကြီးကို ၀ိုင်းဝန်းချီးကျူးကြပြီး နောက်ကြောင်းပြန်မလှည့်ဖို့ ကိုလည်း အကြိမ်ကြိမ် စိုးရိမ်တကြီးနဲ့ ပြောဆိုခဲ့တာတွေကိုလည်းကြားမိကြပါတယ်။ သမ္မတကြီးကလည်း အများပြည်သူရဲ့သဘောဆန္ဒကို အဓိကထားပါတယ်။ OIC လာမယ်ဆိုတော့လည်း သမ္မတကြီးကပဲ အများ ပြည်သူရဲ့ဆန္ဒအတိုင်း OIC ကိုအ၀င်မခံခဲ့တာကိုလည်း တွေ့ကြရမှာပါ။ အဲဒီလိုအများပြည်သူရဲ့ ဆန္ဒတွေကို အသိအမှတ်ပြုတဲ့နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီးကို ပြည်သူများက ချစ်ခင် လေးစားကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ရခိုင်အရေးကိစ္စပေါ်လာတော့ သမ္မတကြီးက လွှတ်တော်သို့တင်ပြတဲ့ ရခိုင်အရေးကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အစီရင်ခံစာကိုတော့ လွှတ်တော်က တိုင်းရင်းသားရခိုင်ပါတီဝင်များနဲ့ ကန့်ကွက်မှုကိုအကြောင်း ပြုပြီး" ပလပ်" ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ လက်ပံတောင်း ကြေးနီတောင်ကိစ္စမှာ ဆန္ဒပြတဲ့ သံဃာတော်တွေနဲ့ အများပြည်သူကို အင်အားသုံးဖြိုခွဲတဲ့ကိစ္စ ပေါ်လာတဲ့ အခါကျပြန်တော့လည်း စာရေးသူစောစောက တင်ပြခဲ့တဲ့ အတိုင်း နိုင်ငံရေးလေ့လာသူတွေနဲ့ အများပြည်သူက နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်တော့မှာလားဆိုတဲ့ စိုးရိမ်စိတ် တွေဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီကိစ္စတွေကိုလည်း သမ္မတကြီးက စုံစမ်းရေး ကော်မရှင်တွေဖွဲ့ပြီး ဥာဏ်အမြော် အမြင်ကြီးစွာကိုင်တွယ်ခဲ့သလို သက်ဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကလည်း သံဃာတော်များကို တောင်းပန်တဲ့ပွဲတွေ ပြုလုပ်ခဲ့တာကိုလည်း တွေ့ကြရမှာပါ။
အခုလတ်တလော ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ကိစ္စတွေကိုလည်း လေးစားဖွယ်ကောင်းတဲ့ ရဟန်းသံဃာတော်တွေ၊ နိုင်ငံရေးပါတီအချို့နဲ့ လူမှုရေးအဖွဲ့ အစည်းတွေကပါ ပြဿနာတွေ မဖြစ်ပေါ်အောင် လိုက်လံတားဆီးနေပါ လျက်နှင့်၊ သံဃာ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့် သက်ဆိုင်ရာဘာသာရေး၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ ပြည်သူ အများစုကလည်း အေးချမ်းစွာနေထိုင်နေကြပါလျက်နှင့် "ဟိုနေရာမှာတော့ ဖြစ်နေပြီ၊ ဒီနေရာမှာတော့ ခံလိုက်ရပြန်ပြီ"စတဲ့ သတင်းတွေကြားနေရခြင်း၊ လူပေါင်းရာထောင်ချီပါဝင်တဲ့ အဖျက်သမား အုပ်စုကြီးက တစ်မြို့ဝင်တစ်မြို့ထွက် နဲ့ လွတ်လပ်စွာသွားလာလှုပ်ရှားနိုင်ခြင်း၊ အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာများကို အခြေအနေကို အချိန်မီထိန်းသိမ်းနိုင်မှု မရှိခြင်း… စသည် စသည်တို့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့မှုများကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ အထူးစစ်ဆေးရေး အရာရှိ သော်မတ်စ်အိုဂျီယာ ကင်တားနားက ဒီ ပြဿနာရပ်များမှာ နိုင်ငံတော် အစိုးရပိုင်းမှ ပါဝင်ပတ်သက်မှု များရှိနေတယ်လို့ ပြောဆိုခဲ့တာကိုလည်း ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။
ဒါကိုလည်း နိုင်ငံတော်ပိုင်းမှ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မှုများပြုလုပ်ခဲ့တာကိုလည်း တွေ့ရှိရပါတယ်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးအနေနဲ့လည်း ရုပ်/သံမှတဆင့် မိန့်ခွန်းပြောကြားခြင်းနဲ့ ကင်တားနားရဲ့ပြောဆိုချက် ထွက်ပေါ်လာအပြီးမှ အဓိကရုဏ်းများ ဖြစ်ပေါ်လာသည်နှင့်တပြိုင်နက် ချက်ခြင်း အရေးယူဆောင်ရွက်မယ့် ကော်မတီ တစ်ရပ်ဖွဲ့စည်းခြင်းနဲ့ နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီးရဲ့မိန့်ခွန်းမှာလည်း "မိမိအနေနဲ့ အင်အားသုံးဖြိုခွင်းတာကို မနှစ်မြို့ကြောင်း၊ ဒါပေမယ့် အများပြည်သူရဲ့အသက် အိုးအိမ် စည်းစိမ် လုံခြုံမှုကိုထိပါးလာမယ့် ကိစ္စမျိုးများကိုတော့ မြို့ပြအင်အားသုံးပြီး နှိမ်နင်းမှာဖြစ်ကြောင်း၊ အဓိကရုဏ်းနှိမ်နင်းရာမှာ တိုင်းပြည်လုံခြုံရေးအတွက် အဓိကတာဝန်ရှိတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ မိမိတို့တာဝန်ရှိသည့်အတိုင်း ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ဆောင်ရွက်ကြစေလိုကြောင်း…" အစရှိတဲ့ သမ္မတကြီးရဲ့မိန့်ခွန်းပြောကြားမှုတွေ ဆက်တိုက် ထွက်ပေါ်လာအပြီးမှာ တိုင်းပြည်အတွင်းမှာ အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ ပြန်လည်ငြိမ်သက်တာကိုလည်း တွေ့ရပြန်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း စာရေးသူအထက်က တင်ပြခဲ့သလိုပဲ "ပါးနပ်သောပျားရည်သုတ် လိမ်းသူများက မည်သို့သော ဗျူဟာ အခင်းအကျင်းမျိုးနဲ့ ထပ်မံထွက် ပေါ်လာမလဲ"ဆိုတာကိုတော့ အခုအချိန်ထိ အများပြည်သူက စိုးရိမ်နေကြတုန်းပါပဲ။
"မင်းအကြောင်းပြောတော့ရာဇ၀င်"ဆိုသည့်စကားအတိုင်း သမ္မတကြီးအနေနှင့် ၎င်း၏ လက်ထက်တွင် မြန်မာ့သမိုင်းကို ရာဇ၀င်အရိုင်းခံလိမ့်မည်မဟုတ်ဟု ယုံကြည်မျှော်လင့် မိသလို သမ္မတကြီးသည် ၎င်း၏ ပကတိဖြူစင် ရိုးဖြောင့်ပြီး သမာသမတ်ရှိသော၊ ဥာဏ်အမြော်အမြင်ဖြင့် ပြည့်စုံသော၊ ကျောသား ရင်သားမခွဲခြားသော ညွှန်ကြားချက်များ၊ လုပ်ဆောင်ချက်များဖြင့် "ပရိဒေ၀ မီးလျှံများကြားမှ ကယ်ကူရာ မဲ့ဘ၀ကို ခံစားနေရသူများ"ကိုလည်း သမ္မတကောင်းပီသစွာ၊ ခေါင်းဆောင်ကောင်းပီသစွာဖြင့် ကယ်တင်ပေး ပေလိမ့်မည်၊ ပြန်လည်ထူထောင်ပေးပေလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ရင်း၊ ဆုတောင်းဆန္ဒပြုရင်းဖြင့် နိဂုံးချုပ်အပ် ပါသည်။ ။
Posted: 06 Apr 2013 04:30 AM PDT
Kaboom. David Stockman attacks America with Critical Warning No. 13. But the guy's biggest problem is not his angry rhetoric. Stockman's problem is he'satruth-teller. Rare today. And not in denial.
Yes, he'satruth-teller. And truth hurts, flushing out his enemies. Why? They're sucking trillions from Americans. So you hate him. Counterattack. Big mistake. Don't dismiss David Stockman. He's no Kim Jong-Un blow-hard.
Stockman'sapatriot assuaging his conscience for having beenamajor weapon in the early launch days of Ronald Reagan's "disaster capitalism"ageneration ago. Today, even though Stockman says "the future is bleak," at least he offers an eight-point plan to correct the "policies that have brought America to an end-stage metastasis," while hedging his bet: It's so "way out, so radical it can't happen." Yes, its DOA.
That's also why Stockman is being attacked asanew "Dr. Doom" by celebrities like Nobel economist Paul Krugman. Still, you needalittle background to see why Stockman's new book, "The Great Deformation: The Corruption of Capitalism in America" is Critical Warning No. 13, as Wall Street pushes us ahead into the fifth year of an aging bull market,afatal fifth year.
And why America's 95 million investors will soon be losing big in the 21st century's third mega market crash, another recession and $10 trillion more losses thanks again to Wall Street's too-greedy-to-fail banks.
Posted: 06 Apr 2013 04:16 AM PDT
M-Media Hate Speech အကြောင်း တစေ့တစောင်း
ဧပြီ ၅ ၊ ၂၀၁၃ M-Media ရေးသူ- သုတေသီ
ထိုညီလာခံမှ ချမှတ်ခဲ့သော သဘောတူကြေငြာစာတမ်း Article 20 တွင် "နိုင်ငံသား၊ လူမျိုးရေး (သို့) ဘာသာရေးနှင့် ဆက်နွယ်သည့် ခွဲခြား နှိမ်ချလိုသော၊ ရန်လိုသော၊ အကြမ်းဖက်လိုသော အမုန်းတရား တို့ကို လှုံ့ဆော်သည့် မည်သည့် ထောက်ခံမှု အားပေးမှုမဆို ဥပဒေအရတားမြစ်ရမည်။" ဟု ပြဌာန်းထားပါသည်။
http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/c0.0.843.403/p843x403/536232_521899887852486_13041654_n.jpg&#8221; width="400″ height="244″ />
Sura or Chapter9– Verse 69 Surah Al-Tawba
This is Chapter 96 verse 9
Nay, but verily man is rebellious (6)
That he thinketh himself independent! (7)
Lo! unto thy Lord is the return. (8)
Hast thou seen him who dissuadeth (9)
Posted: 06 Apr 2013 03:18 AM PDT
That advice comes courtesy ofafamous piece of Wall Street folklore that is known by the adage "sell in May and go away."
Unlike most of the other stories investors tell, however, the historical evidence in favor of this one is surprisingly strong. And deeper drilling into the data suggests there are ways to tweak the approach so that you don't have to dump stocks entirely to capture some of the benefit.
You might also know of the "sell in May" pattern by its other name, the "Halloween indicator." Both refer to the pronounced tendency for the stock market, on average, to turn in its best returns between Halloween and May Day — referred to loosely as the "winter" months.
The stock market's average return during the other half of the year, the "summer" months, is far lower.
This pattern has been very much in evidence in recent years. Since the seasonally favorable period began last Halloween, for example, the Dow Jones Industrial Average DJIA -0.28% has gained 11.5%. During last year's unfavorable six-month period, by contrast, the Dow lost 0.9%. The year before that sawa10.5% gain during the winter months anda6.7% loss during the summer months.
Posted: 06 Apr 2013 03:16 AM PDT
13 Myanmar soldiers killed near border :5Apr 2013 at 14.52 Online news: Asia
Thirteen Myanmar government soldiers were killed and two were missing afterafight with an unidentified armed group near the border opposite Kra Buri district, Ranong, on Friday,asecurity source said.
The clash occurred as the Myanmar troops were patrolling the border in the area where 92 Thais were arrested in August last year for encroaching on Myanmar territory, the source said.
The identify of the attackers could not be confirmed.
Myanmar had sought cooperation from Thailand to prevent the attackers fleeing across the border.
Army chief Gen Prayuth Chan-ocha had directedatask force in the district to keepaclose watch on the border, the source said.
Posted: 06 Apr 2013 05:09 AM PDT
"Simpanan negeri sebelum 2008 tak sampai RM 500 juta. Sekarang kita ada lebih RM 2.6 bilion. Keupayaan mentadbir jelas terbukti. Dari segi pelaburan dalam lima tahun ini, ia mencecah RM 50 bilion.
"Setakat ini, kita juga sudah peruntukkan lebih RM700 juta hasil negeri yang dipulangkan kepada rakyat melalui program Merakyatkan Ekonomi Selangor ia sangat berbeza dengan pentadbiran sebelum ini.
"Konsep hasil negeri untuk rakyat kita laksanakan untuk beri peluang kepada rakyat menikmati limbahan kemakmuran tanpa kira ideologi politik," katanya dalam ucapannya di Majlis Kenduri Kesyukuran pembinaan surau dan cadangan pembinaan bangunan Sekolah Rendah Agama, di Kampung Medan, di sini.
"Jika dahulu, walaupun Jabatan Agama Islam negeri yang menjaga Sekolah Agama Rakyat (SRA), tapi mereka (Umno-BN) tidak memberi peruntukan terus kepada SRA. Ramai anak-anak terasing.
"Kini di bawah PR, kita membuktikan bahawa kita tidak mengabaikan mereka, elaun guru sekolah agama kita naikkan dari RM700 kepada RM1,200 sebulan. Melalui pendidikan, jelas banyak usaha yang sudah dilakukan, permohonan kemasukan ke sekolah agama juga meningkat.
"Kita juga tidak membezakan pendidikan, semua jenis sekolah termasuk sekolah Cina, Tamil dan Islam kita bantu sebab kita percaya melalui pendidikan akan menentukan pembangunan negeri," katanya.
"Bila tiba masa pilihanraya nanti, pilihlah siapa-siapa tetapi janganlah bergaduh, bergaduh itu memalukan. Kematangan perlu ada. Politik-politiklah tetapi jangan sampai pecahkan ruyung. Ini kes tidak betul.
" Tunjukkan tanggungjawab dalam agama untuk memilih orang yang betul. Tidak perlu mengoyakkan bendera atau menurunkan bendera parti mana-mana sekalipun, dengan cara itu kita boleh adakan pilihan raya dengan aman," katanya. -selangorku
Posted: 06 Apr 2013 01:47 AM PDT
My sincere advice and request to the Myanmar Government, Rakhines, Revered Monks, 969 Group, Bama Buddhists, USDP, NLD and Myanmar Military.
Please help stop the Hatred, Hate Speeches, Hate Mongers and Hate Crimes from any race, religion or any party in the whole Myanmar IF you all really love your race, religion and country. And you need to stop segregation of Muslims by creating Muslim Free Zones which could become EASY target of Non-Myanmar-Muslim foreign terrorists which are not under Myanmar Muslims' control.
Yes, if they create Muslim Cleansed Areas or Islam Free Zones or Ethnic Cleansed areas like Rohingya Free areas….there isareal danger for them foravery long time that could become eternal or permanently insecure areas foravery long time.
Although Myanmar Muslims inside Myanmar and outside Myanmar opposed to TERRORISM, International Muslims are angry nowadays you all think you all are right and justifiable.Any form of Racism is not acceptable according to International Norms and standards.
If, may I repeat IF …Islamic Terrorists like Talibans or Iranians or Al Qidah or any other groups wishing to come in…those Muslim free areas would become easy target anytime.
Myanmar Government and those who love Buddhism and Rakhines should reconsider and change their RADICAL stance.
Even if Myanmar Navy ships could block all the coasts…attacking those navy ships could be cost effective targets for the terrorists. Each ship could cost multimillion for our beloved country…
Please reduce your hatred on Islam which IS SO EFFECTIVE that it also breeds the reciprocal hatred on Buddhists by all the Muslims around the world.
Even your friends and protector ASEAN Governments would not be able to control the anger of the radical wings of their people.
My friend Dr. Maung Zarni wrote>>>
Here is an update on the neo-Nazi movement:
In Meikhtila, the authorities are startingawhisper campaign among the town's Buddhists, using fear-mongering tactics.
that the Muslims are going to retaliate for the 3-days of Muslim massacres and destruction from March 20-22, (which in fact the authorities themselves allowed to take place);
that they need to begin extra-cautions and form neighborhood watch groups like vigilentes; and
that Muslims will be transported to Meikhtila weapons, including guns in the bags of rice donated by international Islamic relief organizations.
Local analysis is that the regime is creating this extremely toxic environment which they can exploit at any moment in the future which they deem strategic for them.
တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ တာဝန်ရှိသူအချို့က မိတ္ထီလာက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ ကိုလဲ ကုလားတွေက ကလဲ့စား ချေလိမ့်မယ်လို့ ခြိမ်းခြောက်ပြီး တီးတိုး သတင်းတွေဖြန့်နေပါတယ်တဲ့။
အခုပဲသတင်းတခုရတယ် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အမှန်တရားလို လားသူတယောက်က သတင်းပို့လာတာပါ။
မိတ္ထီလာကို အစ္စလာမ်ဘာသာရေးအဖွဲ့ တွေက ပေးပို့တဲ့ ဆန်အိတ်တွေထဲမှာ လက်နက် တွေ ပါလာနေတယ်ဆိုပြီး တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ တာဝန်ရှိသူအချို့က တီးတိုး သတင်းတွေဖြန့်နေပါတယ်တဲ့။
မိတ္ထီလာက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ ကိုလဲ ကုလားတွေက ကလဲ့စား ချေလိမ့်မယ်လို့ ခြိမ်းခြောက်ပြီး
တအိမ်တယောက် ကင်းစောင့်ခိုင်းပြီး သံသယတွေ အမုန်းတွေ မွေး ပေးနေတယ်တဲ့။
မိတ္ထီလာမှာ ရဲတွေ စစ်တပ်တွေ လုံခြုံရေးရှိနေပါရက်နဲ့ တမင် သံသယသတင်းတွေကို အစိုးရ ဘက်ကနေ ထုတ်ပြန်ထားပြီး
လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာ ပြသနာ ဖန်တည်းဖို့ အဆင်သင့် လုပ်ထားတာပဲ-လို့ပြောပါတယ်။
Ko Ko Htay မိတ္ထီလာပုံမှန်အခြေအနေပြနိရောက်ပြီဆိုပြီးဈေးတွေဖွင့် ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး သတင်းစာထဲ ထည့်ကြေညာတယ်။ ဒါပေမဲ့ မွတ်စလင်တွေကို ဆိုင်ပြန်ဖွင့်ခွင့်မပေးဘူး ။ မောင်းထုတ်တယ်။ လုံချုံရေးတာဝန်မယူနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့။
See they are scared. If Buthitaung…the bombers may be Rakhine Terrorist Rebels or Myanmar Tatmadaw's radical wing. If Muslim cleansed Kyauk Phu, it may be possible to blame International Muslim terrorists…
" ခုဖြစ်နေတဲ့ သတင်းက ကောလဟလ သတင်းဆိုပီး ပြောလို့ မရဘူး။ အာဏာပိုင်တွေ ကိုယ်တိုင်က လူထုကို သတိထားပြီး နေထိုင်ကြဖို့ ပြောထားတဲ့ အတွက် ဒါ ဖြစ်နိုင်ချေ ရှိနေပါတယ်" ဟု သူက ပြောသည်။
Posted: 06 Apr 2013 01:37 AM PDT
What would you do if all of the money in your bank account suddenly disappeared inasingle moment? If you had not kept any paper records, which most Americans do not, it would be exceedingly difficult to prove to the bank that you actually had any money in the bank. If you don't think that something like this could ever happen in the United States, you might want to think again.
Posted: 06 Apr 2013 12:56 AM PDT
the nation braces for what is expected to be the hardest fought
election yet, Christians all over Malaysia are taking turns to bow their
heads in prayer.If things go as planned, at every minute of the
day from dissolution day on April3until polling day,
Posted: 06 Apr 2013 12:46 AM PDT
နှလုံး လှတဲ့ ဒို.အစ္စလာမ်
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရောက် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုး မွတ်စလင်မ် မိသားစုမှ ကယ်တင်ထားသော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ဦး။
အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်တွေ နားလည် နိုင်ပါစေ။။။။။